Ho lasa tsy fahita firy isika rehetra rehefa tonga ny masinina ho antsika - SmartMe
Nandritra ny dimy taona dia nianatra ny ho mpanao gazety aho, ary toy ny ra tao anaty fasika izany rehetra izany - satria ny solosaina dia voalaza fa manaloka ahy eo amin'ny toerako. Satria ny algorithm dia efa afaka manomana lahatsoratra tsotra momba ny toetr'andro, maninona raha afaka folo taona dia tsy maintsy soratany toy izany ny tsanganana fa tsy izaho?
Ho an'ny dia lavitra kokoa amin'ny lamasinina, matetika aho no nitondra boky - satria ny fotoana hamakiana ny famakiana miaraka amin'ny taona toy ny hoe mihena an-tsitrapo ihany, ary avelako hijery alika mahatsikaiky hatory tsara. Ka tsy tokony hijerena ny mpamily amin'ny fiara mifampiarahaba isaky ny fijanonana toy ny teny Krawczyk miarahaba an'i Norek aho fa namaky ny tantaram-piainan'i Tomasz Lis.
Ary fantatro fa mety hamaky ahy ny mpitsikera sasany na hitsiky eo ambany fofonainy, satria be mpankafy toy ny mpanohitra ny mpankafy ity rangahy ity, saingy tsy midika ho azy irery ny toetran'ilay mpanao gazety. Vantany vao naseho ny fomba fijeriny isan-karazany momba ny zava-misy (autobiography, raha ny marina, dia iray amin'ireo endrika fanoratana indrindra), tontolon'ny fiainana haino aman-jery mahaliana ao ambadiky ny sehatra sy ny fivoarany nandritra ny taona maro nipoitra alohan'ny mpamaky.
Ka rehefa nametraka fanontaniana kabary tao anaty bokiny i Lis, mbola nahatadidy ny taratasy karbonina ampiasain'izy ireo amin'ny asa fanontana vitsivitsy ve i Lis tamin'ny fiandohan'ny taona 90, nanomboka nieritreritra ny fomba nanaovan'ny haino aman-jery fandrosoana goavana teo amin'ny teknolojia vitsivitsy monja aho. am-polony taona maro. Ary na dia efa mandrakizay aza ny fahafatesan'ny asa fanaovan-gazety nentim-paharazana nandritra ny am-polony taona vitsivitsy lasa izay, na dia eo aza ny fahatezerana dia tsy te hitifitra ny hoho farany ary handre ireo voninkazo avy any ambany. Amin'izao fotoana izao.
Mbola mividy ny habetsaky ny haino aman-jery taratasy toy ny nataoko 10 taona lasa ve aho? Tsia - ary azo antoka fa tsy izaho irery (sary: ​​kconcha, Lisansa pixel).
Fofonaina farany lava
Ny teny hoe "haino aman-jery vaovao" dia teny fohy mahaliana momba ny fandefasana vaovao, ny olana dia teny manjavozavo izay miova rehefa mandeha ny fotoana. Izy io dia noforonina maherin'ny antsasaky ny taonjato iray ary avy eo ny mpanelanelana somary vaovao sy mandroso dia ohatra ny fahitalavitra izay toa lasa ankehitriny lasa, ireo vaovao dia faran'izay tsara indrindra amin'ny tombony azo amin'ny solosaina, ao anatin'izany ny Internet eo aloha.
Ary io Międzynetć omnipotent io no hita fa mpampijaly ny zava-drehetra tamin'ny taonjato faha-XNUMX - ny gazety, ny onjam-peo ary ny fahitalavitra. Fa maninona aho no tokony hihaino radio, fa tsy ny lisitry ny playlist sy serivisy fampahalalam-baovao napetraky ny dokam-barotra voalohany momba ny mycosis ny toerana akaiky (azafady - tezitra aho), afaka misafidy serivisy mivantana sy mifanaraka amin'ny fomba mifanaraka amin'ny fomba fanao aho an'ny Spotify sa Tidal?
Fa maninona no tokony hiandrasako ny serivisy vaovao amin'ny fahitalavitra, rehefa afaka mifantina fitaovana video amin'ny tenako aho? Fa maninona no heck (tiako foana ny hanoratra an'io) no tokony hiandrasako ny famoahana ny taratasy maraina, rehefa hananako ny fampahalalana rehetra amin'ny vaovao milay mihantona amin'ny tranokala ny harivan'iny andro lasa iny?
Tsy mbola nisy fanamarinana manokana momba ny fifikirana amin'ny "media nentim-paharazana" raha tsy hoe iray no antsoina hoe iray lehilahy antitra, ary sarotra taminy ny nifindra tamin'ny vanim-potoanan'ny solosaina. Tao an-tranon'ny fianakaviako, ny fanjavonan'ny fanontana Zoma Dziennik Zachodni, izay tsy namintina ny herinandro fotsiny raha mila fanazavana, fa koa misy programa TV izay tena ilaina amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, dia hita fa mariky ny fiovana.
Avy eo nifindra tamin'ny harato ny zava-drehetra, na dia tsy maintsy ekena aza fa ny ankamaroan'ny lohateny dia nanaraka ny fotoana. Ny sasany voaheloka ho ambanin'ny bangs na kely kokoa - ary ny ohatra tsara indrindra dia ny milina fanaovan-gazety amin'ny lalao.
Ity ny CD-A-ko ho an'ny tsingerintaona faha-25 an'ny magazine. Mazava ho azy, ho an'ny fandinihana, nandefa ity sary ity tany amin'ny biraon'ny famoahana aho.
Fiarovana ary tsy misy dikany
Ny teny hoe "culte" dia tonta hatramin'ny farany, lany andro, toy ny kiraro ankafizinay izay tsy tiantsika ariana, na dia efa mihintsana aza ny faladia. Na izany aza, heveriko fa ny fampiasana an'ity adjectif ity hiantsoana ny magazine CD-Action (Tsy gazety!) Tsy dia fanararaotana kely akory. Anisan'ireo mpilalao poloney, indrindra ireo izay nanomboka ny fiainany tamin'ny lalao elektronika tamin'ny taona 90 sy 00. Ny CD-Action dia karazan-tsambo fahatsiarovana iray, dingana iray lehibe amin'ny traikefa amin'ny lalao. Tandindona tena lehibe.
Marika iray izay saika nanjavona nandritra ny taona maro ary nila natsangana tamin'ny maty avy amin'ny toe-javatra maty klinika.
Mety hisy hanontany, ahoana no ahafahan'ny magazine noforonina tamin'ny endrika "mirentirenty" - lehibe amin'ny volavola, amin'ny taratasy mahafinaritra, miaraka amina CD, DVD ary gimikora murmurs hafa, miaraka amin'ny atiny tena mahaliana sy maro karazana ao anatin'ny tontolon'ny filalaovana - tonga amin'ny fotoana saika niainany farany? Eny, ny CDA indray mandeha monja dia "nandao ny lampihazo" ary, ny nahagaga, ilay teknolojia.
Na izany na tsy izany taorian'ny 2010 - na farafaharatsiny mahatsapa ahy ilay izy - dia nanomboka tsy nahazo toerana intsony ilay gazety. Ary ny famakafakana an'ity toe-javatra ity dia mety amin'ny tsanganana iray vaovao sy vaovao tanteraka, saingy eto dia ampy ny milaza fa any Wrocław dia tsy noraharahaina ny firoboroboan'ny haino aman-jery mihamitombo hatrany amin'ny Internet.
Mahagaga tokoa fa tsy nohatsaraina ny tranokalan'ny magazine, farafaharatsiny amin'ny resaka sary, ary toa mbola nesorina tamin'ny taona 2008 izy io. Ny famoronana fantsona YouTube iray miasa tanteraka, izay ahafahan'ny fanehoan-kevitra haingana amin'ny hetsika isan-karazany sy ny famoronana karazana karazany (ny ohatra amin'ny tvgry.pl dia naneho ny halehiben'ny herin'ity endrika firesahana momba ny lalao elektronika ity) dia tsy noraharahaina ihany koa .
Toa noho ny fisian'ity trano fanontana ity - tamin'ity tranga ity Bauer - dia tsy sahy tamin'ny revolisiona ihany, fa koa tamin'ny evolisiona, na farafaharatsiny izany no nolazain'ny olona izay nifanerasera tamin'ny magazine tamin'ny dingana samihafa teo amin'ny fiainany taona. Nianjera ihany ny boom-bovoka ary nanatody volamena ny akoho, izay tsy natahotra ny korontana tao amin'ny tsenan'ny gazety, izay nitazomana mafy ny fizarana, ny CD-Action dia nandalo tamina fanjakan'ny faty iray, izay zara raha novelomina. Ny tsy fisian'ny fanovana, na dia tsy izy irery aza no anton'izany, dia azo antoka fa nisy fiantraikany tamin'ny anjaran'ny magazine tamin'izany fotoana izany.
Soa ihany fa nahita mpamatsy vola vaovao ary tsy ho ela - ny 1 aprily 2021 (ary tsy misy vazivazy), tian'ny maro, ao anatin'izany ireo nosoniavina etsy ambony, dia hankalaza ny CDA - uhuhu - faha-25 taonany. Angamba amin'ny endrika somary notapahina raha oharina amin'ny fotoam-pivavahana, angamba miova izy io - soa ihany fa.
Na izany aza, tsy azo lazaina momba anaram-boninahitra maro hafa, na ireo kendrena manokana amin'ny lohahevitry ny lalao informatika, na ireo izay matetika mifandraika amin'ny solosaina na teknolojia vaovao. Ny fotoana vaovao, miaraka amin'ny fivelaran'ny Internet, dia namafa ny maro tamin'izy ireo teny an-tsena, izay tena mahaliana kokoa satria avy amin'ny magazine miaraka amin'ity karazana piraofilina ity no antenainay ny fampifanarahana haingana kokoa sy ny fahalalahana bebe kokoa. Ny maizina indrindra hitanao dia eo ambanin'ny lanterne.
Tsy misy tantara hendry ao ambadik'ity sary ity. Toa mampihomehy fotsiny izany noho ny antony sasany, ka te hizara azy aho (sary: ​​geralt, Lisansa pixel).
Ary rehefa tonga ho ahy koa ny algorithm amin'ny toetr'andro
Misafosafo alahelo noho ny fiafaran'ny haino aman-jery isan-karazany aho hatreto, ary mety ho somary mora tohina amin'ny sain'ny olombelona aho, ary eto no mitranga ny tantara an-tsehatra - efa tamin'ny taona voalohan'ny fandalinana, tany am-piandohan'ny taona 2014 aho. manao tetikasa miaraka amin'ny namako ho an'ny kilasy sasany adinon'ny sivilizasiona momba ny haino aman-jery ary hitako fa ny iray amin'ireo gazety California dia nanomboka nisedra bot matetika izay tokony hanoratra lahatsoratra momba ny toetr'andro. Aza mamorona statistika ary apetraho ao anaty latabatra izy ireo - mamorona fandalinana lahatsoratra mahazatra, mitovy amin'ny fitaovana nomanin'ny lehilahy iray.
Nieritreritra aho tamin'izay - tsara, tsy ratsy, alohan'ny ahafahako mianjera amin'ny mpanao asa fanaovan-gazety voalohany, dia tsy ilaina intsony ny fanatrehako amin'ny haino aman-jery, satria ny masinina dia mety hahavita ny asako. Raha ny marina, folo taona no lasa tsy ho ela taorian'io hetsika io, ary ny olona eo amin'ny tontolon'ny haino aman-jery dia toy ny taloha, ary mety ho elaela ihany izy ireo.
Tsy manana fisalasalana aho fa tsy ny tontolon'ny haino aman-jery ihany, fa ny tontolon'ny asan'olombelona dia ho mandeha ho azy bebe kokoa isan-taona - hatrizay, any aoriana any, ny fandoavana ny fisiany dia toy izany ny toekarena niasa - satria ho vitsy ny asa ho an'ny olona izay hihamaro hatrany. Noho izany, ny algorithma dia hikarakara raharaha marobe mifandraika amin'ny fampitana fampahalalana ho antsika - hanangona ny angon-drakitra izy ireo, handrindra izany amin'ny filaharana ara-dalàna, ary avy eo dia hanome izany amin'ny endrika linguistika, mianatra amin'ny hadisoany ary manatsara ny asany.
Amin'ny lafiny iray, mety ho toa zavatra mahatsiravina amin'ny olona iray mirotsaka amin'ny asa fanaovan-gazety na asa hafa mifototra amin'ny lahatsoratra an-tsoratra izany. Etsy ankilany, mifanohitra amin'izany, hisy vondron'olona tsara vintana izay hotsaboina amin'ny fomba ambony, satria ny teny nokapohin'ny tanan'olombelona dia ho zavatra manokana sy tsy manam-paharoa eo amin'ny tontolon'ny milina manoratra amin'ny maody mekanika.
Fitaovana niavian'olombelona (na dia mampihomehy aza fa tsy feony) dia ho fitaovana manokana, saingy ilaina amin'ny fombany manokana. Satria mandra-pahatanteraky ny fahitana sary mihetsika siansa mahatsiravina loza, izay nanjary nahatsapa tena ny milina ary ankehitriny te-hamongotra antsika, lehilahy iray manana io fahatsapana fahatsiarovan-tena io ihany, hatsaran-tarehy sasany, estetika manoratra - dia dingana iray mialoha ny milina.
Ny programa dia afaka manoratra amiko ny famaritana ny toetr'andro, na dia lahatsoratra iray aza. Fa amin'izao fotoana izao, ny mpanao gazety manetry tena ao amin'ny tontolon'ny iray sy ny zerô dia afaka matory amin'ny fofonaina tony isan-kariva.
Ka amin'izao fotoana izao dia manoto ny tononkirako aho ary manindry fo azy ireo mandritra ny fotoana maharitra. Mandritra izany fotoana izany, ho hitako ny fahafatesan'ny haino aman-jery nentim-paharazana maty, maty ary tsy te ho faty. Eny, indray andro any, ho lasa te hahafanta-javatra fotsiny izy ireo, ary aorian'izy ireo, dia izaho - ilay mpanoratra. Ary tsy hahita afa-tsy ny te hahafanta-javatra - fa tena manokana!